10. Al-baqarah 177 - 189
Banaanbax aad u culus oo maanta ruxay magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay.
on August 31 2013 Banaanbax aad u balaan oo ay ka qeyb galeen waxgarad, odayaal, haween, caruur iyo dhalinyaro ayaa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay, waxaana uu banaanbaxaasi ahaa mid looga soo horjeeday dowladda Soomaaliya.
Dadkii isugu soo baxay banaanbaxaasi ayaa waxay ku hadaaqayeen ereyo ka dhan ah dowladda Soomaaliya, waxaana sida la sheegay banaanbaxaasi soo abaabulay odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle ee ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay.
Banaanbaxaasi ayaa si gaar ah waxaa looga soo horjeeday heshiiskii dhex maray dowladda Soomaaliya iyo maamulka KMG ee Jubba, kaas oo dhawaantaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya.
Beelaha Digil iyo Mirifle ayaa waxay sheegeen inay waayeen kaalin ay sheegen inay ku lahaayeen gobalada Jubooyinka, waxaana ay ku tilmaameen heshiiskii Addis Ababa mid si xaqdaqo ah u dhacay islamarkaana ay si aad uga soo horjeedaan.
Goobta uu banaanbaxa ka dhacaayay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobalka Bay iyo sidoo kale ddayaasha beelaha Digil iyo Mirifle, waxaana ay halkaasi ka sheegeen inay si buuxo kalsoonida ugala laabteen dowladda Soomaaliya.
Odayaashaas ayaa sidoo kale ku goodiyay in qof mas'uul ah oo ka tirsan dowladda Soomaaliya aanay imaan karin deegaanada gobalada Bay iyo Bakool iyagoona dhinaca kale baaq u diray dhamaan mas'uuliyiinta kasoo jeeda gobaladaasi oo xilalka ka haaya dowladda Soomaaliya, iyagoona ugu baaqay inay iska casilaan jegooyinkooda.
Dhawaan ayaa waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya heshiis ku kala saxiixday dowladda federaalka Soomaaliya iyio maamulka KMG ee Jubba oo hogaamiyaha ka ah Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Sheekh Axmed Madoobe).